Amina de Zaria, mpanjakavavy mpiady Hausa - Afrikhepri Fondation
Fifandraisana AFRICAN WOMEN
Amina de Zaria, mpanjakavavin'i Haoussa mpiady
Vakiteny: 5 min
Aminatou, izay ho lasa haza faha-24 an'i Zazzaou (anarana nomena ny mpitondra firenena) dia vao herotrerony 16 taona monja fony ny rainy, Magajiya Bakwa Turunku, no lasa Mpanjaka faha-22 an'i Zazzaou. Tonga reniny ny reniny ary nanapa-kevitra ny hanome anarana ny tanàna hoe "Zaria", avy amin'ny anarana voalohany an'ny rahavavin'i Aminatou izay tiany kokoa. Mandritra ny fanjakan'ny rainy dia hiaina fe-potoana fandriam-pahalemana sy fanambinana ny firenena, na dia hikarakara fampielezan-kevitra miaramila miaraka amin'ny fomba fijery ara-barotra aza ity farany. Ny asan'ny tovovavy izay Aminatu amin'izao fotoana izao dia tsy misy hafa amin'ny an'ny tovovavy hafa mitovy taona aminy. Eny tokoa, mandany fotoana bebe kokoa amin'ny fampiofanana miaraka amin'ny miaramila amin'ny tafiky ny rainy izy noho ny manahy momba ny bika aman'endriny na manonofy an'i Prince Charming. Ary tsy noho izy zanakavavin'ny Mpanjaka, na satria tsy maintsy nanao izany izy, fa satria i Aminatu dia manana fitiavana: ny hai-ady.
Aminatou (na Amina) dia nonina tamin'ny taonjato faha-16 tany Hausa City-States (avaratra atsinanan'i Nizeria ankehitriny) izay nahitana ny fanjakan'i Biram, Daoura, Katsina, Zazzaou (na Zaria), Kano, Rano, ary Gobir , ary izay nanjakan'ny varotra tany Afrika Atsimon'i Sahara. Mpino Silamo izy ary nitondra an'i Zaria (na Zazzaou) nandritra ny 34 taona. Tsy afaka mifanaraka amin'ny antsipirian'ny tantarany ny mpahay tantara, ary misy ny miady hevitra amin'ny maha-Mpanjakavavy azy. Na izany aza, ny Chronicles of Kano, fitambaran-tsoratra tsy fantatra anarana Hausa, dia mitantara amintsika ny zava-niainan'ity mpanjakavavy mpiady malaza ity.
Tamin'ny fahafatesan'ny rainy, tamin'ny 1566, ary araka ny fanaon'ny Hausa dia lasa Mpanjakan'ny Zazzaou ny zandriny lahy Karama. Na izany aza, folo taona monja no nanjakan'i Karama rehefa nisy fahafatesana tampoka nahazo azy, namela ny seza fiandrianana ho an'i Aminatu izay nisolo toerana azy tsy nisy fisalasalana. Na ny vahoaka na ny miaramila ao amin'ny tafik'i Zazzau dia samy tsy matahotra ny fiakarany amin'ny seza fiandrianana, satria i Aminatou dia efa nanambara fanomezana hafakely amin'ny zavakanto miaramila. Ho fanampin'izany, nomena hery ara-batana tsy manam-paharoa izy izay nahazoany ny anaram-bosotra hoe "vehivavy mahay lehilahy". Raha ny marina dia efa nitarika ny mpitaingin-tsoavalin'ny olony imbetsaka i Aminatou nandritra ny nanjakan'ny rahalahiny.
Raha vantany vao nahazo ny seza fiandrianana dia nandefa ny diany miaramila voalohany izy izay haharitra telo volana. Izy io dia mikarakara fampielezan-kevitra miaramila marobe satria ny tanjony dia ny manitatra ny faritanin'i Zazzaou amin'ny alàlan'ny fakana ireo tanàna any ankoatry ny sisintany. Ilay mpanao gazety PJM McEwan dia nanonona ireto andalana ireto avy ao amin'ny Chronicles of Kano:
Aminatou dia naka ny tanàna rehetra avaratra manodidina an'i Kwararafa sy ireo any atsimo manodidina an'i Nupe. Noho izany dia nibahana ny ampahany lehibe tamin'ny faritra Haoussaland izy io, saingy nihoatra lavitra, naka ny faritanin'i Kasashen Baouchi. Aminatou dia naneho ny fanapahany tamin'ny làlam-barotra rehetra izay nampifandray ny andrefan'ny Sodana sy Egypt. Nahomby tamin'ny fandresena ny ampahany tamin'ny faritra avaratr'i Mali koa izy.
Aminatou dia hanangana rindrina manerana ny faritra izay hahombiazany amin'ny fandresena, rindrina mitondra ny anarana "Ganuwar Aminatou" na "Walls of Aminatou" izay mbola misy ny sasany ankehitriny ary mirehareha am-pireharehana ny tontolon'ny tanàna Hausa sasany.
Araka ny angano, Amina dia handà ny hanambady sy hanana zanaka azo antoka. Etsy ankilany, isaky ny faritany izay ho resiny dia handany ny alina miaraka amin'ny lehilahy iray voafidiny izy. Ny ampitson'iny ny fitsapana dia hamono ilay olon-tiana tsy faly izy mba tsy hivarotan'ireto farany satria nanao firaisana akaiky taminy.
Ity misy sombin-javatra iray avy amin'ilay boky hoe "Gift For Queen Amina" nataon'i Lyn Reese, nalaina avy amin'ny tantaran'ny Chronicles of Kano. Ny mpilalao malaza indrindra, tovolahy iray antsoina hoe Lami, dia nitantara ny fitsidihany ny lapan'ny Mpanjakavavy Aminatu:
Ny tranon'ny seza fiandrianana dia efa feno mpikambana ao amin'ny Fitsarana miandry ny Mpanjakavavy. Vao nahita toerana teo amin'ny zoro kely i Lami sy Marka, teo akaikin'ny trompetra, izay niandry ny famantarana hanambara ny Mpanjakavavy. Mpihira iray nanakoako ny feony mba hitsoka ny fiderana ny Mpanjakavavy, nitantara ny fitrandrahana sy fandresena azon'i Amina nandritra ny ady maro samihafa notanterahiny. Nihira izy, nanondro ny fanondrony tamin'ny vahoaka. Naneno ny trompetra ary nanaraka ny feony ny amponga maro an'ny mpanjaka. Nisy mpiambina roa an'ny mpanjakavavy niseho (…). Izy ireo ihany no manan-jo hitondra sandry. Niditra ny fidirana ny mpanjakavavy ary niondrika ny efitrano iray manontolo, niankohoka tamin'ny tany. Tsy nisy navela hijoro raha tsy niteny ny Mpanjakavavy. Avy teo amoron'ny masony, Lami dia afaka nandinika ilay Mpanjaka ary nahita fa tsara tarehy be izy. Manintona sy manintona i Lami ary nieritreritra fa mainty hoditra toy ny reniny izy. Nanao akanjo landy mavo sy volontsôkôlà izy, rojo volamena sy haran-dranomasina lehibe, fehin-tànana varahina ary peratra. Voaravaka lamba volamena lehibe ny volony taovolony ary ho an'i Lami, io no taovolo faran'izay tsara indrindra nomena azy hankafy.
Aminatou Zazzaou dia ho voasoratra mandrakizay ao amin'ny fahatsiarovana iraisan'ny Nizeriana izay nanonona ny anarany hoe "the Warrior Queen of the Hausa".
​Ary manamarika fa avy amin'ny toetran'ny Mpanjakavavy Aminatou no nahazo aingam-panahy ny mpamorona ny fahitalavitra Xena the Warrior.
​Any Nizeria, betsaka no mahatadidy an'ity hira malaza ity hatramin'ny fahazazany izay milaza hoe "AMINATU, YAR BAKWA TA SAN RANA" izay midika hoe "Aminatou zanakavavin'i Nikatau, vehivavy mahay lehilahy".
Amina Manao Mpanjakavavy
3 vaovao avy amin'ny € 11,72
Vidio € 11,72
Nohavaozina farany tamin'ny 17 Jona 2021 11:36 hariva
Fantatrao ve ny atao hoe fivavahana?
Hitan'ny mpitsabo fa mahasitrana homamiadana ny rongony
Pistis Sophia namoaka - Samaël Aun Weor (PDF)
Ny laingan'ny tantara amin'ny fampianarana
Tranombokin'ny hetsika (PDF)